I-Terrestrial ne-Satellite Antenna Systems - Isikhungo Esisha se-Acquedolci
I-Terrestrial ne-Satellite Antennas - Isikhungo Esisha se-Acquedolci
Impahla yasendaweni yobuso nabafaki abagunyaziwe.
Isitolo se electronics a ukuthola nezinsizakalo ze ukufakwa kwezinhlelo zomhlaba ze-antenna zomhlaba kanye nokuthengisa kwe piccoli e Imishini enkulu, Isikhungo Esisha futhi siyisikhungo esigunyaziwe se I-Satellite TV nomthengisi ogunyaziwe we-Wind-Tre Tiscali. Ngilapha onakho ama-antennist afanele nezisebenzi ezinolwazi ze ukulungiswa kwemishini yasendlini.
Ama-elekthronikhi kanye neTherrestrial neSatellite Antennas Center
Isikhungo Esisha isikhungo sokulungisa nokuthengisa sika Abancane e Imishini emikhulu, nge izindiza zasemoyeni nezingcweti eziqeqeshiwe zokufakwa kwe I-Satellite ne-Terrestrial Antennas, izitshalo e I-Satellite TV. Kusuka ekuhlanzeni kuze kuse kuma-microwaves, kusuka umakhala ekhukhwini ai tablet, kuze kube imifanekiso, Imibuzo isitolo sezogesi kuqhosha ngesabelo esikhulukazi se amadivaysi kagesi ngezidingo zangasese nezentengiso. Izisebenzi ziqukethe izindiza zasemoyeni futhi ochwepheshe abagunyaziwe ukufaka I-Satellite TV, Imifanekiso kanye Nezitshalo ze I-antennas yomhlaba ne-satellite. Ukusebenza kahle nokuhlonipha kuyikhaya.
Isikhungo Sokugunyazwa Sokugunyazwa iWind-Tre Tiscali e-Acquedolci,
Okubonakalayo okubanzi kwe umakhala ekhukhwini, smartphone nezesekeli zeselula kungenye yamandla alesi sitolo izinto ezincane nezinkulu. I amadivaysi kagesi atholakalayo akhethwa kusuka kumamodeli wakamuva kakhulu futhi anobuhlakani futhi aveza amamodeli ahlukahlukene ahlangabezana nezidingo zekhasimende elihlukahlukene. Ngaphezu kokuba isikhungo sokulungisa se izinto ezincane nezinkulu, Isikhungo esisha futhi singumthengisi ogunyaziwe weWind-Tre neTiscali. Inani lemali libonakaliswa ingxenye enkulu yokuhlomula kwekhasimende. Ukufakwa kwe I-Terrestrial ne-Satellite Antennas lwenziwa ngokunemba okukhulu nangokucophelela ochwepheshe izindiza zasemoyeni kuvuselelwa njalo. Ama-assortment we-anard-garde kanye nobuchwepheshe obuphambili yibo abasebenza kabi ngale ndlela entsha isitolo sezogesi.
Ikheli: I-Via Ricca Salerno, 18
I-POSTAL CODE: 98070
Umakhala ekhukhwini: 327 5670054
Ifasitela lesitolo: www.newcenter.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 03512790837